दसैंका लागि साकाहारी रेसेपी
२०७६ असोज १९ आइतबार १९:४५:०० प्रकाशित
नेपालीको महान चाड बडादसैं सबैको घर आँगनमा आइपुगेको छ। मिठो खाने र राम्रो लाउने चाड भनेर चिनिएको दसैंमा खानाकै कारण स्वस्थ्यमा विभिन्न समस्या आउने गरेका छन्। सामान्यभन्दा ज्यादा माछा–मासु खाने र शारीरिक कसरत कम हुने हुँदा पनि यस्तो समस्या आएको हो। दसैंमा खानाकै कारण कतिपयको तौल पाँच÷सात किलो बढेको हुन्छ। हप्ता–दस दिनसम्म लगातार माछा–मासु नियमित खानाले शरीरमा थुप्रै समस्या आइपर्छन्।
दसैंमा सबैका घरमा माछा–मासु पाक्ने भए पनि मिलाएर साकाहारी भोजन गर्दा स्वास्थ्यलाई फाइदा पु¥याउँछ। दसैं भन्दैमा बिहान, दिउँसो, बेलुका नै मासु खानुभन्दा रुटिङ मिलाएर हरियो सागपात तथा सलादहरु समावेश गर्नाले शरीर चंगा हुनुको साथै विभिन्न रोग लाग्नबाट सुरक्षित राख्छ। सकिन्छ भने एक दिन पूरै साकाहारी भोजन गर्दा उत्तम मानिन्छ।
मात्रा नमिलाई नियमित मासुको प्रयोगले शरीरमा समस्या बढ्दै जान थालेपछि विश्वमै साकाहारी भोजन गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ। मांसाहारी व्यक्ति साकाहारी बन्दै गर्दा उसले आफ्नो वजन घटाउने र मुटुरोग जोखिम कम गर्ने जस्ता फाइदाहरु तत्कालै प्राप्त गर्न थाल्छ। मासु खानेमा भन्दा मासु नखाने मानिसमा विभिन्न खाले रोगहरुको समस्या कम देखिने गरेको विभिन्न अध्ययन तथा अनुभवले देखाएका छन्।
शुद्ध साकाहारी हुनुका फाइदा
– दीर्घ जीवनका लागि सहायता पु¥याउँछ।
– कोलेस्टोरेल लेबल घटाउन मद्दत गर्छ।
– हृदयघात हुने जोखिम घटाउँछ।
– डाइबिटिज हुनबाट धेरै मात्रामा रोक्छ।
– स्वस्थ छालाका लागि पनि साकाहारी हुनु जरुरी छ।
– साकाहारी भोजन गर्नाले शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन दिँदैन।
– साकाहारी भोजन गर्ने व्यक्तिलाई डिप्रेसन कम हुन्छ।
– साकाहारी भोजन पचाउन सहज हुन्छ।
– आँखाको तेज बढाउन मद्दत पु¥याउँछ।
– व्यावसायिक रुपमा पनि साकाहारी भोजन गर्नेलाई फाइदा पुग्छ।
– क्यान्सरको जोखिम कम हुन्छ।
– मुटुसम्बन्धी रोग लाग्नबाट जोगाउँछ।
– उच्च रक्तचाप हुनबाट जोगाउँछ।
– माइग्रेन हुनबाट जोगाउँछ।
– हर्मनलाई सन्तुलित गर्न मद्दत पु¥याउँछ।
– शरीरमा एलर्जी हुनबाट जोगाउँछ।
– नङलाई मजबुत बनाउन विशेष भूमिका खेलेको हुन्छ।
– दिमागी चुस्तताका लागि पनि भेगान खाना खानु जरुरी हुन्छ।
– खाना पकाउँदा समयको बचत हुन्छ, साकाहारी भोजन तयार गर्न सहज हुन्छ।
लामो समयसम्म माछा–मासु ज्यादा खाँदा मुटुसम्बन्धी रोग, मधुमेह, अटोइम्युन डिजिज तथा क्यान्सर लगायतको जोखिम हुन्छ। जबकी साकाहारी खानेकुरा खासगरी वनस्पतीजन्य खानेकुरा दुखाइ तथा सुन्निने समस्याका प्रतिरोधी हुन्छन्। यिनीहरुमा प्रसस्त मात्रामा फाइबर तथा एन्टिअक्सिडेन्ट हुनुका साथै सुन्निने तथा दुख्ने क्रियामा संलग्न बोसो तथा इन्डोटोक्सिनको मात्रा घटाइदिन्छन्।
मासु तथा अन्य प्रोसेस्ड फुडहरुले खाएको केही घन्टामै शरीरमा दुखाइ तथा सुन्निने समस्या पैदा गर्छन्। मासुमा हुने एनिमल फ्याटसँगको प्रतिक्रियाका कारण हाम्रा रक्तधमनीहरु प्यारालाइज्ड हुन्छन् र धमनी खुल्ने क्षमता आधाले घट्छ। त्यसो हुँदा फोक्सो फुलिन्छ। यस्तो फुलाइ तथा दुखाइ भनेको शरीरको प्रतिरोधी प्रतिक्रिया हो। साकाहारी मानिसमा मोटोपनाको दर मासु खाने मानिसमा भन्दा कम पाइएको छ। मासु खाने तथा साकाहारीहरुले दिनहुँ खाने क्यालोरी खपत बराबर भए पनि मासु खानेहरु बढी मोटोपनाको सिकार हुने गरेको पाइएको छ। यसको कारणमा मासु खानेहरुले वनस्पती प्रोटिन, बिटा क्यारोटिन, फाइबर, म्याग्नेसियम जस्ता तत्वहरुको खपत कम गर्छन् र हानिकारक बोसोको सेवन मात्र धेरै गर्छन्।
कम चिल्लो तर ताजा सागपात, फलफूल र अनाज सहितको स्वस्थ साकाहारी भोजनले वजन नियन्त्रणमा सहयोग गर्छ। हामीले खाने जनावरका मासुमा विभिन्न खाले हार्मोन, किटनासक औषधि, एन्टिबायोटिक्स जस्ता दूषित पदार्थहरु पाइन्छन्, जसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्छ। कुखुरा, सुँगुर, भैँसी, माछा लगायतका मासुमा ई कोली, लिस्चेरिया लगायतका विभिन्नखाले जिवाणु तथा घातक परजीवीहरु पाइन्छन्। त्यसैले मासु नखानाले खानाबाट सर्ने विभिन्न खाले रोगबाट बच्न सकिन्छ।
दसैंका लागि केही शुद्ध साकाहारी रेसेपी
आबोगाडो सलाद : घ्युफल, काँक्रो, कगतीको रस, नुन, हरियो खुर्सानी, धनिया, जैतुनको तेल आदि हालेर सलाद बनाउन सकिन्छ, जुन अति नै मुलायम र स्वास्थ्यवद्र्धक हुन्छ।
पनिर बटर मसला : पनिरलाई रातो ग्रेभीमा हालेर क्रिम र बटर मिसाई इन्डियन मसलाको साथमा सजिलै घरमा बनाउन सकिन्छ।
पालक पनिर : पालकको पिउरी बनाएर पनिरमा मिसाएर काजु पेस्ट र इन्डियन मसला हालेर बनाउन सकिन्छ।
पनिर पसन्द्द : काजु, दूध, मक्खन, उसिनेको प्याज हाली बनाएको सेतो ग्रेभीमा पनिर हालेर बनाउन सकिन्छ र स्वादिस्ट हुन्छ।
कडाइ पनिर : पनिरमा फ्रेस मसला, कडाइ, मसला र भेडे खुर्सानी हालेर सुख्खा गरी पकाउन सकिन्छ।
मटर मसरुम : इन्डियन रिच पहेंलो ग्रेभीमा हरियो केराउ र च्याउ हालेर पकाउन सकिन्छ।
मकै पालक : पालकको पिउरीमा स्विट कर्न हालेर इन्डियन सादा मसलाको साथमा पकाइन्छ।
पनिर चिल्ली : चाइनिज ग्रेभीमा पनिर, भेडे खुर्सानी, प्याज, हरियो लसुन हालेर बनाउन सकिन्छ।
मसरुम छोइला : उसिनेको च्याउलाई डामेर लसुन, अदुवा, तोरीको तेल, कागती रस हालेर मेथी झानेर बनाइन्छ।
पनिर छोइला : पनिरलाई तेलमा तारेर चिसो नुनपानीमा भिजाएर च्याउ जस्तैगरी छोइला बनाउन सकिन्छ।
कुरिलो करी : एस्पारागस करी पनि सामान्य तरकारी जसरी आलु या च्याउमा मिसाएर बनाउन सकिन्छ र यो निकै स्वस्थ र स्वादिस्ट हुन्छ।
तोफु चिल्ली : तोफुलाई तेलमा तारेर नुनपानीमा भिजाएर पनिर चिल्ली जसरी नै सजिलै बनाउन सकिन्छ।
पानीर सादेको : पनिरलाई डामेर या तारेर नेपाली मसला र कागती हाली सादेर पनि खान सकिन्छ।
तरुल डामेको : उसिनेर सेलाएको तरुललाई ताछेर पातलो स्लाइस गरी नेपाली मसला मोलेर तवामा डामेर सुख्खा खान निकै स्वादिस्ट हुन्छ।
तरुल मसला : तरुललाई उसिनेर डाइस काटी गोलभेंडा, प्याज, अदुवा, लसुनको फ्रेस मसला बनाई नेपाली मसला हाली सुख्खा करी बनाएर खान सकिन्छ।
निउरोको तरकारी : निउरोको तरकारी पनि साकाहारीका लागि एक उपयुक्त र स्वस्थ्य विकल्प मानिन्छ र सजिलै बनाउन सकिन्छ।
उमारेको क्वाँटी सुप : ९ थरीका गेडागुडी भिजाएर उमारी पकाएर नेपाली मसला र घ्युमा ज्वानो झानेर खान सकिन्छ।
दाल मक्खनी : मासको गेडा दाल र राजमा भिजाएर पकाई इन्डियन मसला, क्रिम, बटर हाली बनाउन सकिन्छ र निकै स्वादिस्ट मानिन्छ।
पिँडालु हालेको दाल जिम्बु झानेको ः कालो मासको दालमा पिँडालु हालेर पकाई घ्युमा जिम्बु हाली झानेको दाल पनि निकै लोकप्रिय मानिन्छ।
पनिर बिर्यानी : पनिरलाई दही हालेर बनाएको ग्रेभीमा बासमती चामललाई गरम मसला हालेर पकाउने।
नभरत्न करी : मुग्लाई तथा शाहीहरुको यो अति पोसिलो करी विभिन्न ९ सब्जी तथा फलफूल हालेर काजु र खुवाको रिच ग्रेभीमा बनाइन्छ।
मिक्स भेज बिर्यानी : दही र गरम मसला हालेर तयार गरिएको मिक्स भेज करीलाई ८० प्रतिशत पाकेको चामलसँग घ्यु र ड्राइफ्रुट हाली दम गरी पकाइन्छ।
फलदारी कोफ्ता बिर्यानी : काँचो केरा र ड्राइफ्रुटको कोफ्ता बनाएर बिर्यानी ग्रेभीमा हाली चामलसँग दम गरेर पुदिना, काजु र घ्यु हालेर पकाउन सकिन्छ।
पनिर पास्ता : पनिर हालेर सेतो क्रिमी र रातो दुवै ससमा पास्ताका साथमा चिज हालेर बनाउन सकिन्छ, जुन निकै स्वादिस्ट हुन्छ।
पनिर मसरुम पिज्जा : पनिर, च्याउ, चिज हालेर पिज्जा पनि बनाउन सकिन्छ, जुन साकाहारीका लागि उत्तम खाना मानिन्छ।
कोफ्ता कारी : आलु र मिक्स भेजको किमालाई बल बनाएर फ्राई गरी पहेलो रिच नट र क्रिमी ग्रेभीमा पकाउन सकिन्छ।
दाल पन्चमेला : पाँचथरीको दाल मिसाएर इन्डियन फ्रेस मसल र घ्यु या बटर हाली बनाउन सकिन्छ।
पनिर परौठा : पनिरलाई ग्रेट गरी मसला मोलेर आँटाको पिठोमा भरेर घ्यु या बटर हालेर बनाउन सकिन्छ।
आलु तामा बोडी : आलु, तामा, बोडी मिसाएर बनाएको नेपाली झोल तरकारी पनि साकाहारीका लागि उत्तम विकल्प हुन्छ।
मासको बारा : मासको दाल भिजाएर बोक्रा फाली, ब्यान्ड गरी लेदोलाई अदुवा लसुनको पेस्ट मिसाई नेपाली मसला हालेर तोरीको तेलमा बाबर हालेर बनाउन सकिन्छ, जुन नेपाली गोलभेंडाको अचारसँग निकै मिठो मानिन्छ।
दूधबरी : दूधलाई लामो समयसम्म पकाएर घटाई पकाएको र केसरी हालेर बनाएको एक स्वादिस्ट मिठाइ हो।
गुलाब जामन : खुवा र पिठोको मात्रा मिलाएर मुछेर फ्राई गरी चिनी र सुकुमेलको चास्नीमा पकाएर बनाइन्छ।
रसमलाई : दूधलाई फटाएर मज्जाले घोटीघोटी मुछेर डल्लो बनाई चिनीको चास्नीमा पकाएर बनाइन्छ।
गाँजरको हलुवा : ग्रेट गरेको गाँजरलाई घ्युमा भुटेर दूध, खुवा, काजु र किसमिस हाली पकाउन सकिन्छ। गाँजर जस्तै सुजी, पालक, चुकन्दर, मुग दाल, भेडे खुर्सानीको पनि हलुवा बनाउन सकिन्छ।
बुन्दी लच्छा रबडी : दूधलाई लामो समयसम्म उमालेर घटाएर लेदो बनाई बेसनको पिठो र चास्नीबाट बनेको बुनियालाई मिसाएर खान सकिन्छ। चिनी नहाली रबडी सुगर फ्री पनि बनाउन सकिन्छ।
१. मुम्बई किन बन्यो कोरोना हटस्पट
२. कोरोनाको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीको मृत्यु भए ५० लाख दिने प्रदेश १ सरकारको घोषणा
३. साढे २४ सयमा किनेको थर्मल गन १५ हजारमा बेच्न खोज्दा...
४. आयुर्वेदशास्त्र भन्छ– उपकरणविना काम नगर
५. कोरोना नियन्त्रण : राजनीतिक दाउपेचमा रुमलिएको विश्व
६. प्युठानका एम्बुलेन्स चालकलाई पिपिई वितरण
७. कोरोना कहर र जनस्वास्थ्य
८. मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाले नियमित सेवन गर्ने औषधि बिरामीको घरसम्मै पुर्‍याइदिने
९. लाइसेन्स खारेज गर्ने मन्त्रालयको पत्रका विषयमा के भन्छन् मेडिकल र नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्ष?
१०. कोरोनाको आशंकामा जुम्लामा ३ सय २४ जनाको नमूना संकलन